Vaovao - Ny tombony azo avy amin'ny Aluminium Form Work
1. Fahombiazan'ny fananganana avo sy tsingerina fohy: ny rafitra fananganana firaka aliminioma dia rafitra bobongolo haingana, izay azo esorina ao anatin'ny 18-36 ora, ka sosona iray fotsiny amin'ny famolavolana alimina sy sosona telo an'ny tohana tokana no ilaina hihaona ny fepetra takiana. Azo ampiasaina ny fanamboarana mahazatra. Hatramin'ny 4-5 andro ho an'ny rihana voalohany, dia tena nanafohezana ny vanim-potoana fananganana, mitahiry ny vidin'ny fitantanana ho an'ny singa fananganana ary mampihena ny tsingerin'ny fampandrosoana ho an'ny mpamorona trano.
2. Azo ampiasaina sy sarany mora: Azo ampiasaina indray ny kojakoja rehetra amin'ny rafitra formwork aluminium. Ny rafi-pandrafetana aliminioma alim-bary dia mampiasa extrusion integral mba hamolavola profil mombamomba ny aliminioma ho toy ny akora (6061-T6). Andiana famaritana formwork azo avadika ary ampiasaina mihoatra ny in-300. Vidina ambany amin'ny fampiasana.
3. Fanorenana mora sy fahombiazana avo lenta: ny rafi-pandrafetana vita amin'ny aliminioma dia tsotra sy mora mivondrona. Mila mampiakatra ny tabilao mahazatra mahazatra fotsiny izy io mandritra ny fametrahana azy. Ny famolavolana aliminioma dia maivana amin'ny lanjan'ny 18-25 kg isaky ny metatra toradroa. Ny fizotran'ny fananganana dia mivondrona sy entina amin'ny tanana, ary tsy miankina amin'ny fampiakarana ireo fitaovana mekanika (matetika ny mpiasa dia mila wrench na palle kely fotsiny, izay mety sy haingana). Ny installer dia afaka mametraka 20-30 metatra toradroa isan'olona isan'andro (ny mpametaka alim-bary vita amin'ny aliminioma dia afaka mamonjy 30% raha oharina amin'ny volavolan-kazo, ary tsy mila teknisianina. Ampy izay ny fanofanana tsotra ho an'ny mpiasa mpanao trano mandritra ny adiny 1 alohan'ny hametrahana) .
4. Fahamarinana tsara sy fahaiza-miteraka avo lenta: Ny rafitra formwork aluminium dia mivondrona amin'ny alàlan'ny alim-bary. Aorian'ny fanangonana ny rafitra dia hamorona rafitra ankapobeny miaraka amin'ny filaminana tsara izy io. Ny fahaiza-mitondra dia mety hahatratra 60KN isaky ny metatra toradroa, ary tsy hisy ny loza fanitarana bobongolo. .
5. Fampiharana marobe: Ny rafi-pandrafetana vita amin'ny aliminioma dia mety amin'ny singa fananganana rehetra, toy ny rindrina mitondra enta-mavesatra, tsanganana, tsanganana, takelaka, tohatra, lavarangana sns ... izay azo vitan'ny rarahana simenitra indray mandeha.
6. Vokatry ny velaran-tany vita amin'ny simenitra aorian'ny demoulding: Aorian'ny fampidirana volafotsy vita amin'ny aliminioma, ny kalitaon'ny simenitra dia milamina sy madio, izay afaka mahafeno ny fepetra takiana amin'ny famitana sy ny beton-tarehy tsy misy lalotra, izay afaka mamonjy ny vidin'ny fanaovana plastera faharoa.
7. Tsy misy fako fanamboarana eny an-toerana, fananganana azo antoka: Ny faritra rehetra amin'ny fitrandrahana aliminioma dia azo ampiasaina indray, tsy misy fako eo amin'ny tranokala aorian'ny fandroahana demony, tsy misy harafesina, tsy misy loza atrehin'ny afo, tsy misy fantsika vy eo amin'ny toerana fametrahana azy, tsy misy potika hazo navelan'ny ny valan-tsambo vita amin'ny hazo ary potipoti-javatra fanorenana hafa, milamina ny toerana fanamboarana ary tsy hamokatra fako be dia be toy ny fampiasa amin'ny hazo vita amin'ny hazo. Mifanaraka tanteraka amin'ny fenitra fananganana trano maitso. Amin'ny alàlan'ny fampiasana takelaka maivana dia azo antoka fa afaka miasa soa aman-tsara amin'ny tontonana ireo mpanamboatra. 8. Famolavolana indray mandeha, avo lenta ary azo ampiharina matanjaka: arakaraka ny sary amin'ny fananganana, famolavolana indray mandeha, fanidinana tsy tapaka, fanamboarana tery, lesoka kely ary fitadiavana avo lenta, hiantohana ny tanjaka sy ny fiainam-panompoan'ny tranobe, tena mety amin'ny trano avo lenta, avo lenta ary ho an'ny tranobe marobe mitovy karazana tokantrano, ny formwork aluminium dia azo angonina miaraka amin'ny famaritana takelaka samihafa arak'ilay tetikasa. Rehefa atsangana ho tranobe vaovao ny formwork taloha dia ny 20% amin'ny takelaka tsy fenitra ihany no mila soloina.
9. Taham-panarenana avo sy sanda lehibe sisa: ny fitaovana alimina aliminioma dia azo averina simbaina amin'ny fotoana rehetra. Taorian'ny nanesorana ny rafi-pandrafetana aliminioma, rehefa manana sanda ambony ny fitsaboana fako, ny fitaovana rehetra amin'ny famolavolana aliminioma dia fitaovana azo havaozina, izay mifanaraka amin'ny fiarovana ny angovo nasionaly, ny fiarovana ny tontolo iainana, ary ny karbaona Low, ny lalàna mifehy ny fihenan'ny famoahana ary maharitra politika indostrialy.
10. Vitsy ny rafitra mpanohana sy mandeha mora: Amin'ny fomba fanamboarana nentim-paharazana, ny takelaka misy ny gorodona, ny lampihazo ary ny teknika fananganana formwork hafa dia mazàna mampiasa fononteny feno, izay mandany ny asa sy ny fitaovana. Ny rafitra fanohanana ambany amin'ny alim-bolan'ny alimina alimina dia manohana ny fanohanana "fantsom-piraika tokana mahaleo tena" miaraka amina halavirana 1,2 metatra, tsy mila fanohanana marindrano na mirona, toerana fiasana lehibe, mpiasan'ny fananganana, fikirakirana fitaovana malefaka ary mora sy fanesorana mety ny fanohanana tokana. Mora tantana.